के तपाईमा यौन उन्माद बढेको छ ? त्यसो हो भने यौनसम्पर्कको लागि उचित उमेरबारे जानकारी राख्नुहोस्
महिला र पुरुषको समान चाहना आवश्यक
प्रकासित मिति : २०७५ माघ ३, बिहीबार प्रकासित समय : १९:१८
काठमाडौं । गासँ, बास, कपास जस्तै प्रेम र यौनसम्बन्ध पनि मानिसको लागि आवश्यकताको विषय हो । तर यसको ठिक रुपमा प्रयोग नहुँदा भने समाजमा विभिन्न प्रकारका विकृति, विसंगति एवं अपराधहरु निम्त्याउने गरेको देखिन्छ ।
अतः यौनको लागि उमेर, अवस्था र सामाजिक तथा कानुनी मान्यता जस्ता विभिन्न कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ । आवश्यकताको विषय हुनाले यसको विषयमा खुलेर छलफल गर्नुपर्नेमा कतिपयको भनाइ समेत आउने गरेको छ ।
हामीले यौनसम्बन्धको लागि उपयुक्त उमेर के कति हो, स्वास्थ्यको दृष्टिले त्यो विषयमा जानकारी राख्नु समेत आवश्यक हुन्छ । के तपाईलाई थाहा छ ! पहिलो पटक यौनसम्बन्ध राख्ने उमेर कुन हो ? यसबारे किशोरावस्थामा संसारभरि सबैमा उत्सुकता र अन्योल रहेको छ।
प्रत्येक युवाको व्यक्तित्व फरक हुन्छ, कोही १५ वर्षमै तैयार हुन सक्छ भने कोही १८ वर्षसम्म पनि नहुन सक्छ।
अर्का अध्ययनकर्ता डा मेलिसा पाल्मरले भनिन्, ‘हाम्रो अध्ययनले युवावस्थामा पुरुषभन्दा महिला पहिलो यौनसम्पर्कका लागि आफ्नो साथीबाट दबावमा बढी पर्ने देखाएको छ।’
‘यो अध्ययनले झन्डै ९० प्रतिशत युवाले पहिलो यौनसम्पर्कका बेला विश्वसनीय परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेजस्ता केही सकारात्मक कुराहरू देखाएको भए पनि युवाहरू यौनिक सक्रियताको अवस्थामा नपुगेसम्म उनीहरूको बृहत्तर स्वस्थताका लागि थप कार्य गर्नुपर्ने देखिाएको छ।’
पहिलो यौनसम्पर्कका लागि सही समय थाहा पाउँन यौनसम्पर्क गर्नुअघि आफैँलाई यी प्रश्न गर्नुपर्छ !
-के उनले पनि मलाई उत्तिकै माया गर्छन् ? गर्छिन् ?
यदि माथिका सबै प्रश्नको सकारात्मक उत्तर आउँछ भने पहिलो यौनसम्पर्कका लागि उचित समय भएको हुनसक्छ।तर यदि तलका कुनै प्रश्नको उत्तर सकारात्मक भएमा पहिलो यौनसम्पर्कका लागि समय नभएको हुनसक्छ।
-के मैले प्रेमी, प्रेमिका छुट्न सक्छन् भन्ने डरले यौनसम्पर्कबारे सोचेको हुँ ?
स्रोतः एनएचएस च्वाइसेस/बीबीसी
भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरूको जीवन्त कथा: कसैलाई वीरचक्र, कसैलाई जीवनभरिको लागि चोट
काठमाण्डौं । तीन दशकअघि इन्डियन पिस(किपिङ फोर्स (आईपीकेएफ) अन्तर्गत श्रीलङ्कामा खटिएका भारतीय सेनामा कार्यरत